Mihatra aman’aina… | NewsMada
Novinavinain’ny Jirama ho vita ny tolakandron’ny zoma teo ny famahana olana, vokatry ny fikorontanan’ny famatsian-drano amin’ny faritra maromaro eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Tsy mbola mivaha tanteraka anefa izany, ka mahatonga fitarainana maro eo amin’ny mpanjifa. Midradradradra ho fahirano ny mponina ka miantso vonjy. Any amin’ireny tambajotram-pifandraisana ireny sisa no manampatra ny alahelony sy ny fahasorenany. Efa ho lava !
Tany Toamasina, mihatra aman’aina, ara-bakiteny ny vokatry ny fahatapahana matetika amin’ny famatsiana herinaratra amin’ny faritra maro. Ny faran’ny herinandro teo, niafara amin’ny famoizan’aina mihitsy izany, tao amin’ny hopitalibe. Tapaka ny jiro raha teo am-pamonjena ny ainy, nasiana “oxygène” ny raim-pianakaviana iray. Tamin’iny faritra misy ny hopitaly sy ny tobin’ny zandarimariam-pirenena, izany hoe, toerana stratejika iny indrindra no nisehoan’izay fahatapahan-jiro izay.
Tranga notsongaina manokana, niseho tamin’ny faran’iny herinandro lasa teo iny ireo, momba ity olana amin’ny famatsiana jiro sy rano eto amin’ny firenena ity. Fa ahoana ihany àry ? Toa volankakafotra izy izany, ka ny eo ihany no eo. Ny omaly tsy miova. Misy ary hita hatrany, mivoaka amin’ny gazety sy ny tambajotran-tserasera ny filazana fahatapahan-drano sy fahatapahan-jiro avoakan’ny Jirama. Izany dia noho ny hoe fanamboarana, fanarenana ny tambajotra. Na ho an’ny tambajotra mpamatsy rano izany na tambajotra mizara herinaratra.
Inona marina no olana ? Ny fitaovana ve no tsy ampy sa ny mpiasa no tsy maharaka ? Ambaran’ny Jirama ombieny ombieny koa, ary toa lasa ho fialan-tsiny miverimberina fa hoe “efa antitra loatra ny foto-drafitrasa”, sns.
Efa mihatra aman’aina, araka ny voalaza etsy ambony, ny toe-draharaha ankehitriny. Ilaina dia ilaina, araka izany, ny fandraisana fepetra maika dia maika. Impiry moa izay no nanambara fa hoe atao laharampahamehana ity olana ity, saingy… Mandraka ity ny androany, izao ihany no zava-misy. Dia ho sanatria ve hiandrasana aina afoy hafa indray, sanatrian’ny vava ? “Dokotera aorian’ny fahafatesana”, hoy ny fitenenana.